I-Hexamite kwi-discus iintlanzi | Ngeentlanzi
La hexamite Malunga nayo iprotozzo echaphazela ikakhulu iintlanzi zediski. I-Hexamite ithatha ithuba lokuba iintlanzi ziphantsi kukhuseleko ukuze zibangele izifo. Kukholelwa ukuba ikhula emanzini apho umgangatho wamanzi usezantsi.
Siyazi ukuba iintlanzi zediski ziyachaphazeleka kwesi sifo xa siphawula ukuba utya kancinci, kwaye inombala omnyama kunesiqhelo. Izitulo zazo zinentambo, zimhlophe kwaye zinde kakhulu. Ukongeza, ekubeni yintlanzi esebenzayo kakhulu, enobuhlobo nenomdla, kulula ukubona ukuba ikhona into eyenzekayo kuyo.
I-Hexamite, kwinqanaba eliphambili ngakumbi, liyavela izilonda eziqhelekileyo zemingxunya entlokweni yentlanzi. Kuqala njengezilonda ezigqobayo, ukuvelisa ukubola kwesikhumba, kwaye kamva, ukwandisa kunye nokuvelisa izilonda ezimile kumngxuma wentloko. Zonke zinokosulelwa yintsholongwane kunye nefungi.
El Intlanzi yediski inokufa nokuba ayinyangwa ngexesha. Unobangela wokugqibela iya kuba lusulelo lwesibini lwe-microbial, oko kukuthi, zizifo ezinamathuba eziveliswa zizifo eziyinxalenye yezihluma ezincinane zentlanzi uqobo.
Ukuba sithathela ingqalelo ukuba ukunyanga iintlanzi kuso nasiphi na isifo kubanzima xa kuziwa kulawulo lonyango. Zonke okanye uninzi kufuneka zibandakanye emanzini e-aquarium. Ukuba sithathela ingqalelo into yokuba isifo se-hexamite, kanye kanye bayayeka ukutya, kunzima kubo ukuba batyale ukutya ngokutya.
Njengoninzi iintsholongwane kunye nezifo Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuphakamisa ubushushu be-aquarium. Akukho ngaphezulu kwe-34 degrees. Siza kuyinyuka ngokuqhubekayo kwaye kungekudala. Yiyo ke loo nto ukuba intlanzi yediski iphucule amajoni omzimba. Kwiimeko ezininzi iyaziphilisa.
Ukuba esi sifo sihambele phambili kwaye sifuna unyango, sikhona banike iTinidazole. Ezi ziipilisi eziza kuxutywa nokutya kwipapa. Ukuba intlanzi ayilutyi unyango, kufuneka lwenziwe ngqo emanzini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izifo zentlanzi » I-Hexamite kwintlanzi yediski